Yiba Nosukelo | Indlela Onokuphumelela Ngayo Esikolweni
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArmenia IsiBhulu IsiCebuano IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiZulu
Umntu uyiqonda kakuhle into ayifuna esikolweni—atsho asithande ngakumbi— xa eyazi eyona nto ayifunayo kuso.
UKUYA esikolweni ungayazi eyona nto uyifunayo, kufana nqwa nokusuka uphuphutheke ungazi apho uya khona. IBhayibhile ithi: “Zazi apho uya khona.” (IMizekeliso 4:26, Contemporary English Version) Ukuyazi into oyifunayo kuya kukunceda unikele ingqalelo uze ukwazi ukuqalisa umsebenzi sele uwulungele xa uphangela. Unokuzibekela njani usukelo lwento oyifunayo?
Zibuze oku, ‘Ndifuna ukwenza ntoni xa ndiphangela?’ Sukuyibekela amangomso impendulo yalo mbuzo. Umele ucebe kwangethuba. Ngoba? Yicinge ngolu hlobo le nto: Ukuba ubufuna ukuthabatha uhambo, ubuya kuqala ugqibe ngendawo oya kuyo. Emva koko ubuya kukhangela imaphu uze ukhethe eyona ndlela ifanelekileyo. Kunjalo ke nangesikolo. Umele ucinge ngomsebenzi owufunayo, uze ukhethe izifundo eziya kukunceda uwazi.
Isilumkiso: Abaninzi abaselula bazimisele ukwenza kuphela loo misebenzi bavakalelwa ukuba bayayithanda—ngokomzekelo, ukuba ziimvumi ezihlawulwayo—kangangokuba abafuni nokuva ngolunye uhlobo lomsebenzi. Yiyiphi into ebhetele abanokuyenza?
Cinga ngezakhono onazo. Ngokomzekelo, ngaba uyakuthanda ukwenzela abanye iinkonzo? Ngaba unobuchule bokukhanda iimoto noomatshini? bezibalo? bokuphatha imali? bokulungisa izinto?
Cinga ngemisebenzi onokuyifumana. Nguwuphi umsebenzi ovisisana nezakhono onazo? Xubusha nabanye abantu ngezinye izinto onokuzenza kunokujonga kuloo msebenzi “uphupha” ngawo kuphela. Velela iinkalo zonke xa ucingisisa. Ngokomzekelo, ngaba umsebenzi oza kuwufundela uyafumaneka kwezinye iindawo, xa kunokwenzeka ufuduke? Ngaba uqeqesho olufunekayo aluyi kukushiya untyumpantyumpeka ematyaleni?
Cinga ngamathuba onawo. Emva kokuba usazi ukuba nguwuphi umsebenzi oza kuwufundela, khangela ukuba uyafumaneka na kwindawo ohlala kuyo. Ngaba ikho indawo oyaziyo onokuqeshwa kuyo? Ukuba ikho, ngaba iyabaqeqesha abantu abafundela umsebenzi kuyo? Ngaba zikho iindawo eziqeqesha abantu ukuze bafumane umsebenzi?
Icebiso: Thetha nabazali, ootitshala nabanye abahlobo abadala. Khangela uncedo kwilayibri ekwindawo ohlala kuyo nakwi-Intanethi.
Undoqo: Ukuba uzibekela usukelo, oko kuya kukunceda uyazi eyona nto umele uyenze nenjongo yokuyenza.
Kutheni ungaqalisi kwangoku? Ngoxa usesesikolweni, cinga ngeengongoma ezintathu ezikhankanywe ngasentla. Bhala phantsi ezona zinto ufuna ukuzenza, uze uxubushe ngazo nabazali bakho.
Umele ukuba uyiphawule into yokuba kolu ngcelele kusoloko kubhekiselwa eBhayibhileni xa kuchazwa izinto ezingundoqo ukuze uphumelele esikolweni. Abapapashi beli phephancwadi, amaNgqina kaYehova akholelwa ukuba iBhayibhile iqulethe “imiyalelo yobomi obufanelekileyo.” (2 Timoti 3:16, Good News Translation) Iluncedo kubomi bemihla ngemihla—kungekuphela nje esikolweni kodwa nasemsebenzini, entsatsheni nakwezinye iinkalo. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngendlela iBhayibhile enokukunceda ngayo, khangela kwiWebhsayithi ethi www.jw.org, uze ufunde iphepha 32 leli phephancwadi.
Ngaba ufanele uyeke phakathi esikolweni? Zintoni omele ucinge ngazo?
Indlela Onokuphumelela Ngayo Esikolweni—Yiba Nosukelol